Ahoana ny fampiasana 3D Touch amin'ny iPhone 6s sy 6s Plus (I) vaovao | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fampiasana 3D Touch amin'ny iPhone 6s sy 6s Plus (I) vaovao
Hatramin'ny faran'ny volana septambra lasa teo ny vaovao iPhone 6s sy 6s Plus manana fahombiazana lehibe ary izany dia vokatry ny fiasa vaovao fa indrindra ny iray amin'izy ireo, ny 3D Touch. Miaraka amin'izany, ny mpampiasa dia afaka mahazo fidirana amin'ny hetsika haingana ataon'ny rindranasa avy amin'ny kisary eo amin'ny efijery an-trano na miditra amina hetsika sy atiny maro ao anatin'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo. Ity misy torolàlana azo ampiharina izay azonao atao tsara amin'ny fotoana 3D Touch an'ny iPhone vaovao na ho avy.
1 Fihetsika haingana
2 Peek sy Pop
2.0.1 Antontan-kevitra mifandraika
3 Ampandehano ny sary mivantana
Ny «hetsika haingana» dia tsy misy raha tsy avy amin'ny kisary fampiharana eo amin'ny efijery an-trano, ho toy ny hitsin-dàlana mankany amin'ireo fiasa manokana atolotry ny fampiharana. Ohatra, amin'ny fampiharana Pinterest dia hanana fidirana mivantana amin'ny fironana pin ianao, ny asan'ny fikarohana ary ny famoronana pin vaovao. Instagram Quick Action dia mamela anao hamorona hafatra vaovao, hijery ny asany, hikaroka na handefa hafatra mivantana.
Mba hampavitrika ireo hetsika haingana ireo dia mila tsindrio mafy fotsiny ny kisary fampiharana iray. Rehefa miseho ny menio dia kitiho ny rantsan-tànanao mankany amin'ilay hetsika tianao hampiasaina ary hisokatra mivantana amin'ilay asa ilay fampiharana. Aza adino anefa ny manery mafy raha tsy izany dia handika ilay rafitra fa te-handamina indray ireo sary masina ianao ary hanomboka "handihy" izy ireo.
Peek sy Pop
Ny lahasa Peek anda Pop no mitranga ao anaty rindranasa, toa ny "fijerena" ny atiny io. Ny tsindry maivana dia hanokatra varavarankely hahafahanao "mijery" ny atin'ny fampiharana. Ny tsindry mafy dia hanokatra ny atiny izay nojerenao teo aloha.
Peek sy Pop dia azo ampiasaina amin'ny fomba samihafa arakaraka ny tian'ny mpampihatra fampiharana hampihatra azy. Ohatra, mandritra ny fampiharana ny Dropbox, azonao atao ny mijery ao anaty fampirimana iray hahitanao hoe inona ireo antontan-taratasy ao anatiny ary avy eo "Pop" ilay folder raha efa hitanao izay notadiavinao, ao Tweetbot, azonao atao ny manindry ny rohy ao anaty sioka iray hijerena ilay pejin-tranonkala nampifandraisina nefa tsy hitsidika tanteraka an'io pejin-tranonkala io.
Ny rindranasa lehibe mifanaraka amin'ity asan'ny Peek anda Pop ity, saingy amin'ny iPhone 6s sy iPhone 6S Plus ihany no:
Ampandehano ny sary mivantana
Iray amin'ireo fiasa vaovao natsangana tao amin'ny iPhone 6s sy 6s Plus ny Live Photos. Azonao atao ny mampiasa ny 3D Touch hampandeha ity asa ity. Safidio fotsiny ny sary mivantana tianao ho hitanao ary tsindrio eo aminy ny rantsan-tananao. Izy io dia miasa na dia amin'ny "sary mivantana" eo amin'ny efijery fanidiana aza.
Ary rahampitso, bebe kokoa ...
Ahm! Ary aza adino ny Podcast farany nataonay, Apple Talkings 16 | Netflix, Staingate ary fandroids.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » iOS » Ahoana ny fampiasana 3D Touch amin'ny iPhone 6s sy 6s Plus (I) vaovao
Ny serivisy ara-teknika ofisialin'i Apple dia efa manolo ny Apple Watch
Araka ny voalazan'ny Canalys, Apple dia nivarotra Apple Watch 7 tapitrisa